पलिएस्टर पलिएस्टर फाइबर ध्वनिक प्यानल को आवेदन - समाचार - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
पलिएस्टर पलिएस्टर फाइबर ध्वनिक प्यानल को आवेदन
को आवेदनपलिएस्टर फाइबर ध्वनिक प्यानल
ध्वनि-अवशोषित कपासको घनत्व फरक छ, र ध्वनिक सिद्धान्तमा, ध्वनि-अवशोषित कपासको घनत्व जति उच्च हुन्छ, कम आवृत्तिहरू अवशोषित गर्ने क्षमता बलियो हुन्छ, तर जब घनत्व निश्चित दायरा भित्र हुन्छ, अवशोषण गर्ने क्षमता। कम आवृत्ति सीमा पुग्छ। कृपया तपाईंको सम्बन्धित ठाउँहरूको ध्वनिक आवश्यकताहरू अनुसार उपयुक्त घनत्वको ध्वनि-अवशोषित कपास छनौट गर्नुहोस्।
ध्वनि-अवशोषित र ध्वनि-अवशोषित कपास हट-प्रेसिंग बन्डिङ मार्फत उच्च-गुणस्तरको पलिएस्टर फाइबरबाट बनेको हुन्छ। यो एक नयाँ वातावरण मैत्री सामग्री हो जसले परम्परागत हानिकारक ध्वनि-अवशोषित र ध्वनि-अवशोषित सामग्रीहरू जस्तै ग्लास फाइबर, रक ऊन र स्पन्जलाई प्रतिस्थापन गर्दछ। यो कुनै पनि साइड इफेक्ट बिना मानव छाला संग प्रत्यक्ष सम्पर्क मा हुन सक्छ, रंगहीन र गन्धहीन छ, र प्रदूषकहरु लाई छोड्दैन। यो प्रकृतिको सबैभन्दा नजिकको व्यावसायिक ध्वनि-अवशोषित सामग्री हो।
जब आन्तरिक विभाजन वा भित्ता ध्वनि अवशोषण र ध्वनि इन्सुलेशनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यसमा ग्लास फाइबर भन्दा राम्रो वातावरणीय सुरक्षा र ध्वनि अवशोषण प्रभाव हुन्छ, र 100% पुन: प्रयोगयोग्य हुन्छ; यसको धुवाँको घनत्व र विषाक्त ग्यास राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण मापदण्डभन्दा कम छ।
आवेदनको दायरा: कम्प्युटर कोठा, कन्सर्ट हल, बहु-कार्यालय हल, थिएटर, रेकर्डिङ स्टुडियो, स्टुडियो, पियानो कोठा, मेसिनरी कोठा, सम्मेलन कोठा, व्यायामशाला, प्रदर्शनी हल, नृत्य हल, KTV कोठा र परिवार ध्वनि इन्सुलेशन र आवाज कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। ।
को सुविधाहरू र लाभहरूपलिएस्टर फाइबर ध्वनिक प्यानलहरू
1. सामाग्री राम्रो छ, स्वादहीन छ, कुनै पनि हानिकारक पदार्थ जस्तै formaldehyde रिलीज गर्दैन, र 100% पर्यावरण अनुकूल उत्पादन हो। सामग्री राम्रो छ, स्वादहीन छ, कुनै पनि हानिकारक पदार्थ जस्तै formaldehyde रिलीज गर्दैन, र 100% पर्यावरण अनुकूल उत्पादन हो।
2. यो विभिन्न आकार र विशिष्टता, सरल स्थापना, सुविधाजनक निर्माण, आर्थिक र व्यावहारिक मा बनाउन सकिन्छ।
3. लामो सेवा जीवन, फाइबर दृढ छ र तोड्न सजिलो छैन। सड्ने छैन, विभिन्न सूक्ष्मजीवहरू, कवक, एसिड, लवण र हाइड्रोकार्बनहरूको क्षरणको प्रतिरोध गर्दछ;
4. ज्वाला retardant प्रदर्शन राष्ट्रिय आन्तरिक सजावट मानक को B1 स्तर पुग्छ।
5. अक्सिजन सूचकांक A स्तर पुग्छ;
6. उच्च घनत्व, आवाज घटाउने गुणांक ०.७९ पुग्छ; ध्वनि अवशोषण गुणांक NRC = 0.81 पुग्छ;
7. राम्रो पनरोक र सास फेर्ने प्रदर्शन;
8. 100% पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने।
अघिल्लो:कपडा ध्वनिक प्यानलहरू कसरी स्थापना गर्ने
अर्को:ध्वनिक प्यानलहरू छनौट गर्दा विचारहरू